Ithonya lekhwalithi yokusebenza eshisayo yesikhunta ekusebenzeni kwalo - i-Aojie Mold Co., Ltd.
Ithonya lekhwalithi yokusebenza eshisayo yesikhunta ekusebenzeni kwayo
Ikhwalithi eshisayo yokusebenza kwesikhunta inethonya elikhulu ekusebenzeni nasekusebenzeni kwempilo yesikhunta. Empilweni yangempela nasemsebenzini, isikhunta sethu somhlangano sidinga ukuthuthuka okuqhubekayo ekwakhiweni nasekukhiqizeni isikhunta esihlukahlukene, futhi kuzoba nezinkinga ekusebenzeni okuthile. Sizoxoxa futhi sishintshisane ngezinkinga ekusetshenzisweni kwesikhunta sokunyathela nabakhiqizi besikhunta baseShenzhen
Ukuqedwa nokucinywa kwezingxenye ezisebenzayo zesikhunta kanye nokwaphuka kwangesikhathi senqubo yokusetshenziswa konke kuhlobene nenqubo yokusebenza eshisayo yesikhunta.
(1) inqubo UKWAKHA, okuyinto isixhumanisi ebalulekile enqubeni yokukhiqiza izingxenye die zisebenza. Ekubunjweni kwensimbi yensimbi ephezulu, izidingo zobuchwepheshe zesakhiwo se-metallographic njengokuhanjiswa kwe-carbide zivame ukubekwa phambili. Ngaphezu kwalokho, ibanga lokushisa elenziwe kufanele lilawulwe ngokuqinile, kufanele kwenziwe indlela efanele yokushisa, kufanele kutholakale indlela efanelekile yokwakha, futhi ukupholisa okuhamba kancane noma ukufakwa okufika ngesikhathi ngemuva kokufaka kufanele kwamukelwe.
(2) Lungiselela ukwelashwa kokushisa. Ngokuya ngezinto ezehlukene nezidingo zezingxenye zokusebenza ezifa, izinqubo zokwelashwa kwangaphambi kokushisa njengokufakwa, ukujwayela noma ukucima kanye nokushisa kufanele zamukelwe ukwenza ngcono ukwakheka kwezinto ezincane, kuqede ukukhubazeka kwe-microstructure kokufaka okungenalutho nokwenza ngcono ubuchwepheshe bokucubungula. Ngemuva kokulungiswa okufanelekile kokulashwa kokushisa, i-cementite yenethiwekhi yesibili noma i-chain carbide ingaqedwa, i-carbide ingahle ihlanjululwe futhi icwengisiswe, futhi ukufana kokuhanjiswa kwe-carbide kungakhuthazwa. Ngale ndlela, ikhwalithi yokuqeda nokushisa ingaqinisekiswa futhi impilo yensizakalo ingathuthukiswa.
(3) Ukuqeda nokushisa. Lesi isixhumanisi esiyinhloko ekwelapheni ukushisa kwesikhunta. Uma ukushisa kwenzeka ngesikhathi sokucisha nokushisa, okokusebenza ngeke nje kubangele ukuqaqamba okukhulu, kepha futhi kubangele kalula ukuvela nokuqhekeka ngesikhathi sokupholisa, okuzothinta kakhulu impilo yensizakalo yomuntu oshonile. Ngesikhathi sokucisha nokushisa i-die, kufanele kubhekwe ngokukhethekile ukuvimbela i-oxidation ne-decarburization. Incazelo yenqubo yokwelashwa kokushisa kufanele ilawulwe ngokuqinile. Uma izimo zivuma, kungasetshenziswa ukwelashwa kokushisa. Ngemuva kokucima, kufanele ithanjiswe ngesikhathi, futhi izinqubo ezihlukile zokushisa kufanele zamukelwe ngokuya ngezidingo zobuchwepheshe.
(4) Ukuncishiswa kwengcindezi. Izingxenye zokusebenza ze-Die kufanele ziphathwe ngokuncishiswa kwengcindezi ngemuva kokushaywa okunamandla ukuqeda ingcindezi yangaphakathi ebangelwe yimishini emibi, ukuze kugwenywe ukushuba okweqile nemifantu ebangelwa ukuqedwa. Okwenziwe isikhunta ngokunemba okuphezulu, ukwelashwa kokunciphisa ukucindezeleka kuyadingeka ngemuva kokugaya noma imishini kagesi, evumayo ukuzinzisa ukunemba kwesikhunta nokwenza ngcono impilo yenkonzo.